ကချင်သောင်းကျန်းသူသမိုင်း (၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်ထိ)
မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး
ကရင်အမျိုးသားပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ပါတီတည်ထောင်ရန် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပါတီမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခဲ့ရာ ၂ ...
ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမည်ဖြင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ချင်းပြည်နယ်တွင် နှစ်နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် တပ်မတော်အစိုးရမှ အာဏာမလွှဲပဲ အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရန် စီစဉ်မှုအပေါ် ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် ပါတီများအား ဖျက်သိမ ...
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါတီကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပါတီဝင်အရေအတွက် ၃၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝိုင်းမော်၊ မိုးမောက ...
တိုင်းလိုင်အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုင်းလိုင် ခေါ် ရှမ်းနီလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးရန်အတွက် တည်ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပါတီ၏မူဝါဒမှာ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ...
၁၉၅၀ ဩဂုတ် ၂ ရက်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ညောင်ရွှေအရှေ့ဘက်ခြမ်း မဲဆန္ဒနယ်၊ မိုင်းပွန်မဲဆန္ဒနယ်၊ ရပ်စောက်မဲ ဆန္ဒနယ်တို့တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွိုင်လုံ၊ သာမိုင်ခမ်းမဲဆန္ဒနယ်တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ရွ ...
၂၀၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တည်ထောင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း အနည်းငယ်သာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပါတီခေါင်းဆောင် ပြဿနာများကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ...
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Mon Unity Party- MUP ဟု လူသိများသည်။ မွန်အင်အားကြီးနှစ်ပါတီ ပေါင်းစည်းထားသည့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီသည် ပါတီဝင်အင်အား တစ်သိန် ...
မွန်အမျိုးသားပါတီ သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Mon National Party- MNP ဟု လူသိများသည်။ မွန် ဒီမိုကရေစီပါတီနှင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ပါတီနှစ်ခုကို ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၄ ဇန်နဝါ ...
ရှမ်းနီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ နိုင်ငံရေးသဘောတရားမှာ ရှမ်းနီလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖြစ်ပါသည်။ ပါတီမူဝါဒမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ရေး၊ တို ...
လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါတီ၏မှုဝါဒမှာ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ လားဟူးတိုင်းရင်းသားများ၏ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း စဉ်လာ၊ အနုပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ...
လီဆူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ဩဂုတ်တွင် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ၌ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပါတီဝင်အရေအတွက် ၅၀,၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချ ...
၁၉၈၈ အရေးအခင်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်မှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြင့် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ တွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပါတီ၏ တရားဝင်ရ ...
အင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနှင့် အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီကို တစ်ပါတီတည်းအဖြစ်ပေါင်းစည်းရန်အတွက် အင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး အင ...
အမှတ်စဉ် ၁၈၈ မှ အမှတ်စဉ် ၂၂၈. ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်း အမှတ်စဉ် ၂ မှ အမှတ်စဉ် ၁၄. ၁၉၀၀ ပြည့် နောက်ပိုင်း ဝံသာနုလှုပ်ရှားမှုခေတ် အမှတ်စဉ် ၁၃၂ မှ အမှတ်စဉ် ၁၈၇. ၁၉၈၈-ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့ အရေးတော်ပုံကြီးနောက်ပိုင်း အမှတ်စဉ် ၆၆ မှ အမှတ်စဉ် ၁ ...
ကချင်အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၁၃ မြို့နယ်၌ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း ၃၇ ဦးဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ကို ရန်ကုန်တွင် ရောက်ရှိနေသော ကမန်လူမျိုးများဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းက ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် UEC ထံတွင် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က မှတ ...
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ၏အမွေကို ဆက်ခံယူထားသော ပါတီဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး သဘောတရားမှာ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ လူအများကောင်းစားရေး ဝါဒဖြစ်သည်။ ပ ...
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး သဘောတရားမှာ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်သည်။ ဦးသုဝေ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တာဝန်ယူပြီး ယခင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းများ၏သမီးများ ဖြစ်ကြသော ဒေါ်သန်းသန်းနု ၊ ...
ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁,၅၀၀ ခန့် ပါဝင်သည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDPပါတီ)သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အင်အားကြီး နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Union Solidarity and Development Party - USDPဟု လူသိများသည်။ ပြည်ထောင်စု ...
၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ မေလ-၁၅ ရက်နေ့မှာ ထိုင်းနယ်စပ် တနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ‘၁၉၉၀ ပြည့်-ရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကျော်ဟာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြပြီး ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ ကို အတိအလင်း စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပ ...
ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပါတီတည်ထောင်သူ ၁၉ ဦးတွင် ထက်ဝက်ကျော်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ကြပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ စီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်ခဲ့သူ ဒေါက်တာ ဦးမြင့်၊ စီးပွားရေးပညာရှင ...
စစ်ပြီးခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးတပ်ဦးကြီးသဖွယ် နိုင်ငံတွင်းသာမဟုတ် ကမ္ဘာတလွှား၌ပင် ထင်ရှားခဲ့သော အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်ခေါ် ဖဆပလ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ထား ...
ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး ခေါ် ဖတပလ ကို ဂျပန်များ တော်လှန်ရေး အတွက် ၁၉၄၄ ခု၊ ဩဂုတ်လ ညဦး အချိန်တွင် ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်း၊ ယခု နတ်မောက်လမ်းရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အိမ်တွင် အထူး အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အစည်းအ ...
ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကရင်လူမျိုးများ ကိုယ်စားပြု နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအတွက် အဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသားများအခွင့်အရေးအတွက် လှုပ်ရှားနေသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
GW သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနှင့်အတူ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး လူငယ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတိုက်အခံလှုပ်ရှားမှုကို အရေးယူနိုင်သော ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းထားရာ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့လျှင် အစိုးရထံ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်တေ ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ-၂၀ ရက်နေ့မှာ မာနယ်ပလောမှာ စတင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ BLC အဖွဲ့ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက် ရှေ့နေကြီး ဖြစ်သူ ဦးအောင်ထူး ကနေ ကမကထပြု စတင်လှုံ့ဆော် လှုပ်ရှား ကြိုးပမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ ...
မြန်မာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့တိုင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ရှိနေကြသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ တသီးပုဂ္ဂလများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစု ...
ပါတီဝင်တစ်ဦးသည် အောက်တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသော စည်းကမ်းများကို တိတိကျကျစောင့်ထိန်းလိုက် နာရမည်- ဒ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီအဖွဲ့အစည်း၏ အစည်းအဝေးသို့ခွင့်မပန်ပဲ ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။ ခ အခြားမည်သည့် ပါတီ၏သစ္စာကိုမျှ မခံယူရ။ ဇအများပြည်သူ အကြည်အညိုပျက်စေမည့် အပြောအဆ ...
၈၈၈၈ အရေးအခင်း ပြီးနောက်တွင် မြို ခေါ် ခမိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ Mro or Khami National Solidarity Organisation ကို ဦးစံသာအောင်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လေးနေရာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ကျောက်တော ...
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌမှာ နိုင်ထောမွန်၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌမှာ နိုင်ဟံသာ နှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှာ နိုင်အောင်မင်း၊ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှာ နိုင်ဇွဲယျ၊ ပြည်တွင်းရေးရာဌာနကြီး တာဝန်ခံမှာ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် နိုင်ဝင်းလှ၊ နိုင်ငံရေးဌာနကြီး တာဝန်ခံ နို ...
ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာ ခြောက်နေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ ၁၀ နေရာခန့်နှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်နေရာ ၂၀ ကျော်တို့တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပ ...
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရခိုင်လူမျိုးများ ကိုယ်စားပြု ပါတီဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး သဘောတရားမှာ ရခိုင်လူမျိုး အခွင့်အရေး နှင့် ကွန်ဆာဗေးတစ် ဝါဒ ဖြစ်သည်။ ပါတီ ...
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျားဖြူပါတီ ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး သဘောတရားမှာ ရှမ်းလူမျိုး အခွင့်အရေး နှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖြစ်သည်။ ပါတီမူဝါဒမှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့အညီ ကျင့်သုံးသော ...
၁၉၆၈-ခုတွင် ပအိုဝ်းလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ မှ ရှမ်းပြည် လူမျိုးပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့သည်။ ပအိုဝ်း ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်စံသိန်းအသတ်ခံ ကျဆုံးသွားရပြီးနောက် ရလလဖကို ဗိုလ်မှူး လှမောင်က ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ တပ်ရင်း ...
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးအောင်မိုးဇော်ဖြစ်ပြီး ဒု-ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဒေါ်နိုးနိုးထက်စံနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှာ ဦးသီဟထွဋ်ခင် ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပသည့် ...
အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့အခြေစိုက် အင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအမှုဆောင် ကော်မတီဝင်ဟောင်းများက ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌ မ ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ)မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အင်အားကြီး နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် National League for Democracy - NLD ဟု လူသိများသည်။ ...
အင်္ဂလိပ်လို = 88 Generation student Youths ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နေ့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ကို အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ပထမဆုံးဦးဦဖျားဖျား မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့သောပါတီ ဖြစ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌမှာ ပြည်ထောင်စုမြန် ...
ဗြိတိသျှနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ် ပေါင်းများစွာကစ၍ ကွန်ဆားဗတစ်ပါတီနှင့် အတိုက်အခံ အာဏာလုဖက် ဖြစ်ခဲ့သော လစ်ဗရယ်ပါတီသည် ပထမတွင် ဝှစ် ပါတီအမည်ဖြင့် ထင်ရှားလေသည်။ လစ်ဗရယ်ဟူသော နာမည်ကို ၁၈၁၅ ခုနှစ်လောက်တွင် စတင်သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း ၁၈၄ဝ ပြည့် ...
ဂရိဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ လေဘာပါတီ သည် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဖြစ်၏။ ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သော ပြုပြင်ရေး အက်ဥပဒေအရ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားလူတန်းစာသည် မဲပေးခွင့်ရခဲ့ လေသည်။ သို့သော်လည်း အစတွင် ဗြိတိသျှအလုပ်သမားမျးသည် ဥရောပ တိုက်နိုင်ငံတို့မှ အလုပ်သမား ...
ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ် ဆိုသည်မှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ အုပ်ချုပ်ရေး ပုံစံကွဲ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည် အတော်များများတွင် ကျင့်သုံးကြပြီး တည်ငြိမ်မှုရှိသည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ် သတ်မှတ်လက်ခံကြသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့် ပါလီမန် ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော် ဟုအဓိပ္ ...
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် အရွယ်ရောက်သူတိုင်း သည် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့် ရရှိကြသည်။ ဒေသန္တရအဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် လည်းကောင်း၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်း ရွေးကောက်ပွဲများတွင်လည်း ကောင်း လူထုသည် မိမိတို့ သဘောကျနှစ်ခြိုက်သူများကို မိမိတို့ ကိုယ်စား ...
လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ အစည်းအရုံး၏လွတ်လပ်ခြင်း ဟူ၍လည်း ဖလှယ်၍ သုံးစွဲခြင်း သည် အများ၏စိတ်ဝင်စားမှုများကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ဖော်ပြရန်၊ မြှင့်တင်ရန်၊ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန်အတွက် အတူတကွလာရန် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ အစည ...
အရပ်ဘက်-စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံများတွင် အလွန် အရေးပါသော ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းနှင့် စစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု အကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံရသော နယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရက်တစ် အဖွဲ့အစည်းတွင် အရပ်ဘက် အာ ...
နိုင်ငံတော်၏ ခေါင်းဆောင် သည် နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသော တရားဝင်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ပုံအရ နိုင်ငံတော်၏ ခေါင်းဆောင်မှာ အခမ်းအနားတက်ရန် ဟန်ပြနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟူ၍ ရှိသည်။ ဥပမာ အိန္ဒိယတွင် သမ္မတမှာ အခမ်းအနားတက်ရန် ကိစ္စ ...
သက်ဦးဆံပိုင်စနစ် သို့မဟုတ် ဘုရင့်အစိုးရစနစ်သည် ရှေးအကျဆုံး အစိုးရစံနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းစံနစ်အရ နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာသည် အုပ်ချုပ်သူဘုရင့်လက်၌ တည်ရှိလေသည်။ ဘုရင်တစ်ဦးတည်း လက်ထဲ၌သာ အချုပ်အခြာအာဏာတည်သော အုပ်ချုပ်ရေးမျိုး ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရင်စနစ်တ ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင ..
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေ ..
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ..
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အစိုးရကအားပေ ..
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပ ..